पानी, प्रेम र बिहे अस्वीकार, तर दलितका छोरीमाथि बलात्कार « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 27 May, 2020 7:06 am
काठमाडौं, १४ जेठ । दलित परिवारको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन, त्यसैले समाजको न्याय मानेर बलात्कारी पुरुषको पछिपछि गएकी बालिका त्यही साँझ गाउँको रूखमा भेटिइन्, झुन्डिएको अवस्थामा ।
यो घटनाले बालिकाको बिहे गराइदिने स्थानीय जनप्रतिनिधिको न्याय मात्र होइन, हाम्रो समाजको चेतना नै रूखमा झुन्डिएको सन्देश दिएको छ । घटना हो रुपन्देही देवदहको । शुक्रबार साँझ १३ वर्षीया स्थानीय दलित बालिका अंगिरा पासी घरबाट हराइन् । बुबाको निधन भइसकेको छ । आमाले हारगुहार गरिन् । गाउँले जम्मा भएर खोज्न हिँडे । राति ११ बजे उनी नजिकैको खरबारीमा भेटिइन्, उनको साथमा थिए स्थानीय २५ वर्षीय वीरेन्द्र भर ।
यो विषयमा छलफल गर्न अर्को शनिबार बिहान वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीसहित समाजका अगुवाहरूको भेला बस्यो । समाजले भन्यो, ‘बालिकामाथि अन्याय भएको छ, त्यसैले वीरेन्द्रले सजाय पाउनुपर्छ । सजायस्वरूप अब उनले बालिकालाई श्रीमती स्विकार्नु पर्छ ।’
आमा शान्ति देवीले भनिन्, ‘गाउँ समाजका मानिस जुटेर छलफल भएको थियो । छलफलमा वीरेन्द्र भरले मेरो छोरीलाई श्रीमती बनाउँछु भन्यो । वडाध्यक्षले समेत अब छोरीलाई जिम्मा दिनु ठीक हो भन्नुभयो । सबैको फैसलापछि छोरी वीरेन्द्रको पछि लागेर गएकी हो ।’
देवदह–२ पेटवनिया रोहिणी खोला किनारमा उनको लास भेटिएको थियो । शरीरको माथिल्लो भागमा लगाएको कपडा च्यातिएको, भित्री बस्त्र देखिएको र चप्पल समेत नलगाएको अवस्थामा बालिकाको शव फेला परेकोे प्रहरीको भनाइ छ ।
तर, विपन्न दलित परिवारकी नाबालिकामाथि जघन्य अपराध भएको देखेर पनि प्रहरीले मुद्दा चलाउन मानेको थिएन । यो आत्महत्या हो भनेर प्रहरीले घटनालाई साम्य बनाउन खोजेको थियो ।
तर, १३ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार गर्ने मात्र होइन, उनको बिहे गराइदिएर लगातार बलात्कार गर्न दिने फैसला सुनाउने समाजले पनि अपराध गरेको छ । यति लामो पृष्ठभूमिपछि रूखमा बालिका झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्दा पनि यो आत्महत्या भनेर प्रहरी मौन बसेको थियो ।
माया आफूसँगै काम गर्ने युवासँग घर फर्कदै थिइन् । जंगलमा आएपछि उनलाई यौन प्रस्ताव राखेको र नमानेपछि पाँच जना मिलेर बलात्कार र हत्या गरेको पुष्टि भएको छ । घटनामा दोषी ठहर भएका चारजनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले माघ ०७६ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।
जघन्य अपराधका मुद्दामा पनि न्याय पाउन आफूले धेरै दुःख पाएको बुबा हर्कबहादुर विक बताउँछन् । बलात्कार र हत्यामा संलग्न भुवन खाती र सुरज चौधरीलाई कर्तव्य ज्यान र जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जन्मकैद भएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवादी गणेश बडुवाल र मनोज बोगटीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम कारबाही भोगिरहेका छन् । अर्का प्रतिवादी टपेन्द्र बोगटी पनि पाँच वर्षको कैद सजाय काटिरहेका छन् ।
छिटो टुंग्याउनुपर्ने जघन्य अपराधका मुद्दामा एक वर्ष ढिला गरेर भए पनि न्याय पाएको बुबा हर्कबहादुर विक बताउँछन् । प्रतिवादीमध्ये भुवन खाती र सुरज चौधरीलाई कर्तव्य ज्यान र जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जन्मकैद काटिरहेका छन् ।
त्यस्तै, प्रतिवादी गणेश बडुवाल र मनोज बोगटीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम कारबाही भोगिरहेका छन् । अर्का प्रतिवादी टपेन्द्र बोगटी पनि ५ वर्षको कैद सजाय काटिरहेका छन् ।
रुकुम घटना एउटा हत्या मात्र होइन, जातीय आधारमा दलितमाथि सदियौँदेखि भइरहेको ज्यादती उस्तै छ भन्ने डरलाग्दो प्रमाण हो । छुवाछूत र जातीय विभेद उन्मूलन गर्न देशले थरीथरीका कानुन बनाएको छ, पटकपटक घोषणा गरेको छ, पछिल्लोपटक १० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय र ऐन पास गरेको थियो ।
तर, जातीय विभेदविरुद्ध कानुन पास भएको दिन देशभर उत्सव हुनुपर्नेमा दलित युवा र उनका साथीहरूको रगत बगेको छ । जातका आधारमा गरिने विभेद दण्डनीय बनेपछि यो नौ वर्षमा १७ जना नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । कोहीले अन्तरजातीय प्रेम र विवाहका कारण, त कोहीले पानी र चुलो छोएको निहुँमा ।
तर, चुलो छुन र प्रेम गर्न निषेध गरिएको दलित समुदायका किशोरीहरूलाई कथित माथिल्लो जातकाले बलात्कार भने गरिरहेका छन् । बलात्कारपछि न्याय पाउनुको सट्टा युवतीहरूको ज्यान लिने काम भएका छन् । यही नौ वर्षमा मात्र चार युवतीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ, चार जनाको छुवाछूतको नाममा र एक महिलाको बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरिएको छ । त्यस्तै, दलित भएकै कारण आठ पुरुष पनि मारिएका छन् ।
नरहरिनाथ–९ की दलित महिला सदस्य मना सार्की १९ जेठ, ०७५ मा दिनभरि खेतबारीको काम गरेपछि हातखुट्टा धुन धारामा गएकी थिइन् । तर, सार्वजनिक धारा छोएको र पानी अछुतो बनाएको भन्दै उनलाई छिमेकी राजिन्दा शाही र सिर्जना शाहीले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेका थिए ।
उपचार गर्न समेत लैजान नपाएपछि मनाको त्यही राति ११ बजे ज्यान गयो । चार दिनपछि आफन्तले शव बुझेर दाहसंस्कार गरे, कुटपिट गर्ने छिमेकी दुई महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको छ । तर, परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन, बरु उनीहरूलाई अहिले पनि छिमेकीले लाञ्छना लगाइरहेका छन् ।
वडामा सर्वाधिक भोट ल्याएर जितेकी सार्कीको जघन्य हत्या हुँदा पनि वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाले एउटा शोक विज्ञप्तिसमेत ननिकालेको शिक्षक नेपालीले बताए । उनले भने, ‘माथिल्लो जातकाहरू एकमुख भइहाले, बरु हामीमाथि अनेक लाञ्छना लगाउने कोशिस गरियो ।’
०७७– नवराज विक (जाजरकोट) अन्तर्जातीय प्रेम
०७७ –अंगिरा पासी (रुपन्देही) बलात्कार, बालबिहे र हत्या
०७७ – टीकाराम नेपाली (रुकुम) अन्तर्जातीय प्रेममा सहयोग गर्दा
०७५– माया विक (कैलाली) बलात्कारपछि हत्या
०७५ –दितिया रेष्मा रसाइली (धनुषा) बलात्कारपछि हत्या
०७५ – रूपमतीकुमारी दास (मोरङ) अपहरण, बलात्कारपछि हत्या
०७५ – मना सार्की (कालिकोट) अछुत भन्दै कुटपिटबाट हत्या
०७५ –श्रेया सुनार (कास्की) बलात्कारपछि हत्या
०७३ – अजित मिजार (काभ्रे) अन्तर्जातीय विवाहपछि हत्या
०७३ – लक्ष्मी परियार (काभ्रे) बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या
०७३ –अस्मिता सार्की (झापा) अन्तर्जातीय प्रेम असफल
०७१ – राजेश नेपाली (पर्वत) छुवाछूत
०७० –संगीता परियार (तनहुँ) अन्तर्जातीय प्रेम
०७० – झुमा विक (ताप्लेजुङ) हत्या
०६८ –सेते दमाईं (दैलेख) अन्तर्जातीय विवाह
०६८ –शिवशंकर दास (सप्तरी) अन्तर्जातीय विवाह
०६८ –मनवीरे सुनार (कालिकोट) चुलो छोएको निहुँमा
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा देशभरका सरकारी वकिलको कार्यालयमा दलितमाथि ज्यादतीका ४५ मुद्दा थिए । तर, तीमध्ये २१ वटा मुद्दा मात्रै कसुर ठहरिए । बाँकीमा पीडकले सहजै सफाइ पाए ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा देशभर जम्मा एक सय चार मात्रै उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रहरीका अनुसार दलित भएका कारण कोठा नपाएको, मन्दिरमा प्रवेश तथा पूजा गर्न नपाएको, धारा तथा इनारमा पानी भर्न नपाएकोलगायत मुद्दा धेरै छन्  । त्यस्तै, अन्तरजातीय विवाह गर्दा ज्यानै गुमाउनुपर्ने, धम्की आई मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने तथा झुटा मुद्दा लगाई दुःख दिने, सरकारी कार्यालयमा समेत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्ने कार्यबाट पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता हुन्छन्, तर अदालतमा प्रमाणित हुने दर कम छ । मुद्दा दर्ता भएर मात्र पुग्दैन । अनुसन्धान, अभियोजन र प्रमाण जुटाउने काम महत्वपूर्ण हो । त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हो ।
यहाँ त सबै घटनामा जरासम्म पुगेर अनुसन्धान नै हुँदैन । अनुसन्धान राम्रै भयो भने पनि ठीक ढंगले अभियोजन भयो कि भएन ? उजुरी सुन्ने निकाय कति संवेदनशील भइदिन्छ ? भन्ने विषयले मुद्दामा अर्थ राख्छ । फौजदारी मुद्दामा साक्षी प्रमाणले पनि फरक पार्छ ।
अब त दलितकोे मुद्दा दलितले मात्र उठाउने स्थिति अन्त्य हुनुपर्यो नि ! अब त यो विषय गैरदलितले उठाउनुपर्यो । दलितले त भोगेको छ । तर, अब त अरू शिक्षितहरूले पनि बोल्नुपर्‍यो ।
कि शिक्षित र सभ्य भनिएकाहरूचाहिँ यसबाट मजा लिएर बस्ने अनि समाजवादउन्मुख समाजको परिकल्पना गर्ने हो ? हामीले समाजवादउन्मुख संविधान जारी गर्र्यौँ भन्छौँ । के यस्तै विभेद भइरहने हो भने समाज समाजवादउन्मुख हुन्छ ? यसरी समतामूलक समाज बन्छ ? यसरी त बन्दैन होला नि । त्यसैले अब सोच बदल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
बेपत्ता तीन जनाको खोजी जारी, हत्या आरोपमा १२ जनाको नाममा किटानी
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–८ को दलित बस्ती अशान्त छ । दलित युवा नवराज विक र कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिकाबीच बिहे गराउन रुकुमको सोती गएका तीनजना युवाको शव भेटिएको छ ।
आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गराउन माग गर्दै उनीहरूले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरिरहेका छन् । उता, आक्रमणमा परेका तीन युवा अझै बेपत्ता छन्, नदीमा हेलिएर खोजी पनि जारी छ । मंगलबार दिनभर भेरी नदीमा खोजी कार्य जारी रहे पनि तीन जनाको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
भेरीमा खोजी जारी ः पश्चिम रुकुममा आक्रमणमा परेका तीन युवा अझै बेपत्ता छन् । मंगलबार दिनभर भेरी नदीमा खोजी कार्य जारी रहे पनि तीनजनाको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
भेरी नगरपालिका–४ का नवराजसहित सोही ठाउँका गणेश बुढा र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का टीकाराम सुनारको शव भने सोमबार नै फेला परेको थियो । अन्य तीनजनाको खोजी कार्य जारी रहेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी किशोरकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘भेरी नगरपालिका–११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र वडा नं. ४ का सन्दीप विक बेपत्ता छन् । चौरजहारीका टीकाराम सुनारको मात्र पोस्टमार्टम गरिएको छ भने बाँकी दुई जनाको पोस्टमार्टम गर्न बाँकी छ,’ श्रेष्ठले भने ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशैभरि भइरहेका जातीय विभेदका घटनाप्रति शून्य सहनशीलता कायम गरी अनुसन्धान र शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पश्चिम रुकुममा शनिबार बेलुकी भएको घटना अमानवीय, आपराधिक र जातीय विभेदको पराकाष्ठा भन्दै आयोगका प्रवक्ता सचिव वेद भट्टराईले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाबारे सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
आयोगले त्यस्ता घटनामा जीवन गुमाउनेका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत भनेको छ ।
यस्ता घटना नेपालको संविधानको धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर ऐन, २०६८ तथा नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रय महासन्धि, १९६५ विपरीत रहेको भनेको छ । घटनाका बारेमा जिल्लास्थित मानवअधिकार अनुगमन समितिबाट अनुगमन भइरहेको जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट